Warar Goos goos ah. Ruunkinet 30/10/2009
Ururka xisbul islaam oo ka hadalay waan waan ay wado dowlada liibiya.
Ururka Xisbul Islaam ayaa si kal iyo laab ay ku dheehan tahay u soo dhoweeyay Dib u heshiisiintii dhowaan ay ku baaqday Dowladda Libiya, taasoo ay ku sheegtay in dhinacyada isku haya Siyaasada Soomaaliya u qabaneyso.
Afhayeenka Xafiiska Hogaamiyaha Xisbul Islaam Sheekh Xasan Dahir Aweys oo la yiraahdo Maxamed Macalin Cali ayaa soo dhoweeyay warka ka soo yeeray Dowladda Libiya.
"Waan soo dhoweyneynaa warka ka soo yeeray walaalkeen Mucamir Al-Khadafi, waana taageersanahay dadaal kasta oo uu xal ugu raadinayo Soomaaliya"ayuu yiri Maxamed Macalin.
Maxamed Macalin ayaa sheegay in aanay marnaba ogolaan doonin qorshayaasha IGAD ee ku aadan howlaha siyaasada Soomaaliya, isagoo ku eedeeyay Urur Goboleedkaas in sanadihii la soo dhaafay uu abuurayay qalalaasaha Soomaaliya.
Inkastoo Xisbul Islaam uu cod dheer ku sheegay inuu taageersan yahay Dib u Heshiisiinta Libiya ku dhawaaqday ayaa hadana la ogeyn go'aanka kooxda kale ee majaraha adag ee Shabaab, iyadoo Afhayeenka Shabaab dhowaan uu sheegay in Dib u Heshiisiin salkeeda yahay Shareecada Islaamka ay doonayaan.
Kulamo badan oo Dib u Heshiisiin ah oo lagu qabtay dalalka Dibada ayaa fashilmay, kadib markii ay mucaaradeen dhinacyada hunguri doonka ee isku haya talada Soomaaliya, taasoo sii fogeysay helitaanka baadigoobkii Dowladnimo.
Xaalada magalada galkacyo oo dagen ka dib dagaalo shalaya ka dhacay magaladasi.
Xaalada magaalada Galkacyo ee Gobolka Mudug ayaa saaka ah mid degan, kadib dagaal ay dad badan ku dhinteen oo shalay ka dhacay, kaasoo u dhaxeeyay Ganacsato ka soo jeeday Galmudug iyo Ciidamada Dowladda Hoose ee Puntland.
Dadka ku dhaqan magaalada Galkacyo ayaa xalay ku seexday cabsi, kadib markii labada maamul ay kala xirteen Magaalada yar, waxaana dhaq dhaqaaqyada guud ee magaalada aheyd xalay mid iska caadi ah.
Wararka laga helayo magaalada ayaa tibaaxaya in dhaq dhaqaaqyo iska soo horjeeda ay ka socdaan Magaalada, taasoo aan la ogeyn salkeeda, waxaana Ganacsatada ka soo jeeda Koofurta Galkacyo sheegayaan in ay la dagaalamayaan hadii bur burin lagu bilaabo Ganacsigooda.
Culumaa'udiinka Ahlu Sunah Waljamaacah ee gacanta ku haya Ammaanka Koofurta Galkacyo ayaa bilaabay dadaalo ay labada dhinac ugu kala dab qaadayaan, waxaana waan waanta socota ay tahay mid ugub ah.
Lama oga tallaabooyinka u qorsheysan labada dhinac hase ahaatee Mas'uuliyiinta Puntland iyo Galmudug ayaa midba midka kale ku eedeeyay inuu lahaa mas'uuliyada shaqaaqadii shalay ka dhacday Bartamaha magaalada Galkacyo.
Beljeim: Raysalwasaaraha Soomaaliya oo la kulmay Madaxda Midowga Yurub. 30. oktober 2009
Beljiem-Raysalwasaaraha dawladda KMG ah ee Soomaaliya Cumar C/rishiid Cali Sharmaake oo ku jira socdaal taageero raadin ah ayaa la kulmay Madaxda Midowga Yurub, oo uu kala hadlay xaaladaha dalka Soomaaliya iyo sidii ay uga soo bixi lahaayeen dhaqaalihii ay ubalan qaadeen dawladda Soomaaliya.
Raysalwasaaraha oo ay la socdaan Wasiiro dhowr ah oo ka tirsan dawladdiisa KMG ah ayaa la kulmay Madaxa arrimaha dibada iyo Siyaasada ee Midowga Yurub, oo uu lasoo qaaday dagaalka Soomaaliya iyo gacanta Midowga Yurub ee taageerida dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Mr. Sharmaake ayaa usheegay Midowga Yurub in ay dawladda KMG ah aad uga xun tahay dagaalada ka socda dalka Soomaaliya, isagoo sheegay in ay dagaaladaasi wadaan kooxo uu ugu yeeray kuwa diidan nabadgalyada dalka Soomaaliya, taageero weyn oo wanaagsana ka hela dalalka taageera Argagixisada Caalamiga ah, waxa ugu yeeray.
Raysalwasaaruhu wuxuu ka codsaday Midowga Yurub in ay bixiyaan qeybtoodii kaga aadanayd lacagtii lugu balan qaaday Xarunta Midowga Yurub ay bixiyaan, wuxuuna sheegay lacagtaasi o dhameyd $250 Malyan, in aysan soo gaarin ilaa hada, ayna heyso dawladda Soomaaliya dhaqaale la'aan xoog leh.
Madaxa arrimaha dibada iyo Siyaasada ee Midowga Yurub ayaa sheegay in ay dawladda Soomaaliya ku faraxsan yihiin in ay ka shaqeyso caasumada dalka Soomaaliya, wuxuuna balan qaaday in ay taageero wanaagsan siin doonaan dawladda faderaalka ee Soomaaliya.
Wada hadaladan dhexmarayMadaxa arrimaha dibada iyo Siyaasada ee Midowga Yurub & Raysalwasaaraha dawladda KMG ah ee aan laheyn itaalka badan ayaa isku raacay ugu dambeyntii in wax bada la wada qabto, isla markaasna waxa ay siwadar ah ugu baaqeen Caalamku in ay bixiyaan lacagihii ay ubalan-qaadeen dawladda Faderaalka KMG ee Soomaaliya.